Shirka Golaha Wadatashiga Qaran oo furmay
Waxaa saaka xarunta Afisyooni ee magaalada Muqdisho ka furmay Shirka Wadatashiga Qaran ee doorashooyinka Soomaaliya, kaas oo u dhexeeya madaxda dowladda federalka iyo kuwa maamul goboleedyada, waxaana shir guddoominaya Ra'isul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Furitaanka shirkan waxaa ka qeybgalay madaxda shanta maamul goboleed iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, waxaana shirkan oo horudhac ah ay madaxda ka qeybgaleysa uga doodi donaan xallinta khilaafka ku gadaaman qabsoomida doorashada iyo hirgalinta heshiiskii 17-kii September.
Wariyaha VOA-da ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Cabdulle ayaa soo sheegaya in Ra'isul Wasaare Rooble uu shalay ilaa xalay shirar gooni-gooni ah la qaatay madaxda maamul goboleeyada, si uu u abuuro kalsooni u dhexeysa dhinacyada dowladda iyo maamul goboleedyada.
Warbixinta Shirka Afisyooni
Ra'isul Wasaare Rooble oo shirkan iclaamyay horraantii bishan, kaddib markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku wareejiyay mas'uuliyada hannaanka doorasha iyo amniga dalka ayaa sheegay inay ka go'antahay fududeynta wax kasta oo horseedi kara in shirkan uu guuleysto.
Wixii warar ah ee shirkan ku soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan.